Taariikhda My Butros » 10 Amarrada Dating Wixii Haweenka
Ma jiraan xeerar kasta marka shukaansi? Dabcan waa ay jiraan. Dad badan oo ka mid ah, dhab ahaan, laakiin wax badan oo ka mid ah waxaa la dhaqanka shuruud oo ay ku kala duwanaan karaan dal illaa kale oo ka mid ah koox qowmiyadeed oo si kale u. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sharciyo aasaasi ah oo ku sii ansax dunida oo dhan. Halkan waxa ku jira 10 Haweenka amarrada waa inay xushmeeyaan markii shukaansi:
1. Return Yeedhay si ku habboon
Haweenka sida ay waqti qaadato ka hor inta uu soo miyirsaday in nin ee u eg inuu jeclaan. Haddii aad daneyneyso in ninkaas, aad, aad ku noqon lahaa uu call si ku habboon. Xataa haddii aad doonayso inuu u ciyaaro adag si aad u hesho, isku day inaadan si aad u hesho in ka badan 48 Xadka saacadaha sabab wanaagsan la'aanteed. Ma sii magaalada ka maqan yahay sharaxaad sax ah. Qof walba waxa uu telefoonka gacanta maalmahan, ama ku dhawaad ​​qof walba.
2. Maamuus balamaha
Waxaad u malayn kartaa in loo fududeeyo dadka ragga waa badan ee haweenka ee kaymaha shukaansi duurjoogta ah. Rumayso ama ha rumaysan, taasi run ma aha. Ma sahlana had iyo jeer si aad u hesho geesinimada inaad weydiiso qof dumar ah oo ka baxay. Haddii wuxuu ku samayn, oo waxaad tidhi haa, isku day in aad ku eekaan qorshayaashaada. Ma wici ma ahan oo keliya si aad u joojiso in daqiiqadii ugu danbeysay. Laga yaabaa in uu aad u hesho aragti ah inaad ma aha in badan isaga galay. Well, aad bay u wanaagsan in aan noqon, laakiin xaaladan oo kale waa in aad ku heshiin in meesha ugu horeysa.
3. Ha qaato Hogaanka
Ma u muuqdaan kuwo aad u qadiimka aad u? Waxaa laga yaabaa inaad la yaabay si aad u ogaato in wax badan ayaa weli waxay sameeyeen sida dugsigu jir. Dadka intooda heshaa ugaadhsadaha, ugu yaraan waxoogaa yar. Ha naftaada ugaadhsado, laakiin isaga caawiyaan haddii baahidu timaaddo ay isaga diro ee signallo xaq u.
4. No Ex Wadahadalo
Iska daa mawduucan u chat chit la saaxiib aad ah! Cabitaanka A ka mid ah gabdhaha wax badan oo ku habboon xaalad aad kala hadasho ex. Isagoo aan aheyn qarsoodi ah oo ku saabsan, ma bandhigan dhan ee la soo dhaafay aad tashuush inta lagu jiro marxalada koowaad ee aad xiriir.
5. Dhig Focus iyo Smile
Smile A waa ka qiimo badan tahay tan ah ee ka samaysan. Waxay ka dhigaysa mid aad wejiga ku dhaashado iyo taaso lover iman kara arki ugu fiican ee aad ah. In kasta oo taariikhda ah, isku day in aad diiradda aad fiiro isaga, iyo fogaado madaxaaga jeestay kadib markii guys kale, iyadoo aan loo eegayn sida kulul waxay u dhawdahay inay. Dhegayso waxa uu ku yidhaahdeen, sii wado xiriirka indhaha, oo waxay noqon howlgalayaa. Taasi waa dabeecad nin fili lahayd. Haddii aad waa qadhaadh, wareeri, iyo murugo, inuu iloobin ka dib in ay soo wac.
6. Ha aad u badan kama cabbi
Jawiga waa iska caadi ah oo dabacsan. Wax kasta oo u muuqata in ay ka shaqeeya wanaagsanyahay. Waxaad dareemi jirrabay in ay a cocktails yar ama galaas khamri ah. Ha! Qofna ayaa sheegay in aan laguu oggolayn inaad taaban cabitaanka khamriga. Ma Just ka badin. Natiijadan ayaa laga yaabaa sida sexy sida aad u malaynayso.
7. Ha u eg digger dahab ah
Maxay aad doorbidayso, helidda wehelkaaga, ama il maalgelin ku meel gaar ah. Ha u dhaqmaan sida haddii uu yahay bangigaaga. Haddii uu go'aansado inuu ka iibsan hadiyad aad u, waxay aqbalaan, laakiin ha weydiisato. Waxaa intaa dheer, aadan ku raacsaneyn isaga si bixinta kirada, ama aad siiso xadiga bil walba lacag sida uu kaliya ku dhamaan yaabaa inay dareemaan sida iibsashada jacaylka aad.
8. Noqo gabadh
Xasuusnow waxyaabaha aasaaska u ah dhaqanka waalidka aad idiin baray marka aad ahaayeen kid ah? Waxay weli codsan markii shukaansi. Ha illoobin dhaqan iyo sii isticmaalaya erayo qaali ah "fadlan" iyo "mahadsanid" xitaa haddii aad wanaag ku imminkaba taqaanid. Caqligaaga dhahana ma faafin lugahaaga furan sida dude ah xataa haddii aad tahay surwaal xiran. Qof dumar ah oo la safeeyey ma illoobo ku saabsan xeerarka yar oo aasaasi ah oo xataa ka dib sano guurka hooyada.
9. Tus xiisaha
Bixinta ay nin ammaan ah waa wax dumarka inta badan iloobaan samaynaya. Ragga oo kaliya sida xasaasi u ah erayada iyo baaqyada fiican naga sida. Ha ka waaban inaad u sheegaan in uu u muuqdo weyn ee maaliyada cusub uu ku dhigay gaar ahaan aad u. Tus xiisaha wax fiican samaynayaan isaga! Waxa uu aad u qaato inay casho? Maxaad uma baahnid inaad isaga yeedh Xagga meel guriga qado u sameeyey inuu isbedel? Waad ogtahay waxa cookies uu jecel yihiin? Raadi cuntada oo aad ka dubtaa Dufcaddii fiican isaga. Gacmo ka fudud sida kuwan soo dir fariin. Waxay tusi doonaa in aad daryeel iyo in aad samaynaysey dadaal, aad.
10. Ha heli qaawan maalinta ugu horeysa ee
Jacaylka arko koowaad? Dad badan ayaa ku doodi doonta in ay tahay oo kaliya infatuation. Laakiin, Aynu niraahno aad ka markii ugu horeysay aad u dhigay indhaha ku midba midka kale ku dhacay jacayl iyo waa labada dhinac. Si kastaba ha ahaatee, isku day in aad ka fogaadaan qaadan qaawan maalinta ugu horeysa ee. Waxaad dhunkado karo iyo hab, laakiin waxa ay u yarayso had iyo jeer wuxu leeyahay dheeftiisa. Sidee kale ee aad lahayd la hadleynaa samaynta jacaylka iyo ma ahan oo keliya galmada?